Shiinaha Automatic warshad mashiinka maaskaro carruurta iyo saarayaasha | Nadiifinta
Maaskarada carruurta oo otomaatig ah oo buuxa oo ku jirta hal mashiin waa nooc cusub oo qalab ah oo loo sameeyay macaamiisha si ay u soo saaraan maaskaro kartoon Japanese ah. Waxay u isticmaashaa 1 ~ 4 lakab oo ah PP dhar aan tolmo lahayn oo isku duuban, kaarboon firfircoon iyo walxaha sifeynta sida qalabka quudinta. Maaskarada waxaa sameeya tikniyoolajiyadda ultrasonic. Maaskarku wuxuu leeyahay qaabeyn cad, alxamid xoog leh iyo xawaare dhakhso leh, kaas oo buuxiya shuruudaha wax soo saarka. Naqshadaynta maaskarada waxay si adag ula jaanqaadaysaa heerarka imtixaanka ee Yurub iyo Ameerika, waana hawlgal si otomaatig ah u shaqeeya. Mashiinka oo dhan wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeed, sameysmo, lugo alxamid ah, alxanka isku laaban iyo qaybo kale. Mashiinka maaskaro ee otomaatigga ah wuxuu soo saari karaa oo keliya waji daboolan oo la tuuri karo, laakiin ma ahan N95 iyo maaskarada rikoodhada.
Haddii maaskaro ay caafimaad tahay waxba kuma laha mashiinka. Maaskarada ay soo saartay qalabkan waxaa loo isticmaali karaa sida maaskaro qalliin illaa inta jeermiska la iska siinayo. Mashiinkaani wuxuu korsadaa xakamaynta shaashadda taabashada PLC. Suunka xamuulka qaada ee ugu weyn waxaa lagu qaadaa matoor hal waji ah, mootada talaabada la rogrogo, gudbinta waa sax, koontaroolku waa xasilloon yahay, xawaarahana waa la hagaajin karaa
Astaamaha qalabka ：
1, saamaynta alxanka waa wanaagsan yahay iyo heerka failure waa yar yahay;
2, Xawaaraha waxsoosaarku waa mid hufan, oo leh 80-100 kiniin daqiiqaddii, oo si joogto ah loo soo saari karo 24 saacadood;
3, Kumbuyuutarka PLC xakameynta barnaamijka, adeegga adeegga, darajada sare ee otomaatiga;
4 interface Is-dhexgalka saaxiibtinimo ee nin iyo mashiin, qalab aan caadi ahayn iyo alaarmiga yaraanta, hagista shaashadda si aan dhaqso wax looga qaban.
Magaca badeecada mashiinka maaskaro ee carruurta oo otomaatig ah Cabirka qalabka L3600xW3500XH2000 （mm）
Habka wax soo saarka SYK-650B cadaadis 5 ~ 8kg / cm²
Awoodda qalabka 2700W
hufnaanta wax soo saarka 50 ~ 70pcs / min Miisaanka qalabka ≤3000kgQiyaastii ≤ 3000kg
Liiska qaybaha xirashada caadiga ah
Buundada jeexjeexa sanka
1 3 bilood
2 3 bilood
4 3 bilood
Maqas gu '
2 6 bilood
Suunka Hummer suunka wareega
3 3 bilood
Hordhaca sixitaanka (ikhtiyaar)
Mashiinka jir rullaluistemadka waa nidaam sixiddiisa Howlsocodsiye ah oo ay ku shaqeyso shaashad taabasho buuxda oo buuxda. Waxaa si gaar ah loogu adeegsadaa in lagu dabagalo cidhifka maaddada, khadka toosan iyo heerka digriiga. Waxay ku habboon tahay xakamaynta otomaatiga ah ee hagaajinta leexashada u dhexeysa qalabka duubista. Weecinta leexashada maaddada waxaa lagu xisaabiyaa ultrasonic, dareemayaal infrared iyo CCD, natiijadana waxaa keena natiijada. Mashiinka iyo jawaab celinta koodhka ayaa loo isticmaalaa si loo saxo qalabka miisaanka si sax ah, inta badan loo isticmaalo calaamadda xarigga wax soo saarka maqaarka aan nadiifka ahayn, daabacaadda jilitaanka, samaynta bacda iyo warshadaha kale.
1.servomotor is-barasho: marka hore ku bilow mashiinka gobolka gacanta, taabo qaabka "system parameter Seting key key" oo u gudub xuduudaha nidaamka si aad u dejiso is dhexgalka ugu weyn, dhagsii "badhanka aqoonsiga madax-dhiigfuranka otomaatiga ah" ka bilow barashada. Mootadu horay iyo gadaal ayey u socon doontaa, oo waxay si toos ah u baran doontaa culeyska iyo istaroogga, si ay u hesho gobolka ugu fiican ee shaqeynaya. Kadib marka la dhammeeyo, kantaroolaha ayaa ku laaban doona gobolka "buug".
2.vual press press "left" key, sax leexashada ayaa u dhaqaaqi doonta bidix, riix furaha "midig", saxida leexashada ayaa u dhaqaaqi doonta midig, hadii jihada ka soo horjeedda, riixi karto "system parameter set key switch" fure u gal "system parameter setting master master" ", dhagsii" batoonka la dhigay "si aad ugu dhaqaaqdo isbedelka jihada gacanta, ka dibna riix" badhanka dejinta bixida "si aad u joojiso, Kadibna jihada gacanta ayaa loo beddelay.
3. gal gobolka "sixitaanka otomaatiga ah", go'aamiya in jihada otomaatiga ay sax tahay, haddii jihada ay ka soo horjeeddo, u wareeji "sixitaanka gacanta" gobolka, sida ku xusan "set otomaatikada gobolka tooska ah ee toosan iyo isweydaarsiga xun" jihada gawaarida, markaa jihada otomaatigga ah ayaa la wareejin doonaa.
Nidaamkan sixitaanka talaabadani wuxuu u socon karaa si caadi ah, "sixitaanka gacanta" gobolka waxaa lagu dejin karaa "nidaamka xuduudaha si loogu badalo badhamada" oo loo galo "nidaamka parametering setting master interface". Xuduudaha u dhigma waa la hagaajin karaa, iyo hagaajinta xasaasiga ah guud ahaan laguma talinayo inay aad u weyn tahay ama aad u yar tahay.
Shaqeynta la dheereeyay:
1 Waxyaabaha wali joogsiga: Shaqadani waxay ku jirtaa "otomaatiga" xaaladda. Markay sheyga si lama filaan ah u jabo ama u dhammeeyo socodkiisa, sixitaanku ma ordi doono ilaa dhamaadka ilaa dhamaadka, laakiin wuu dib u dhacaa muddo (waqtiga dib u dhaca ayaa la dejin karaa). Iskuxirka dejinta xakamaynta ayaa lagu wadaa "On" marka maaddada la jaro.
2 xakamaynta dibedda: shaqadani waxay xakamaysaa "otomaatig" iyo "buug-gacmeed" iyada oo loo beddelayo calaamadaha dibadda, marka "otomaatiga" iyo "COM" ay ku xiran yihiin gaaban, U beddel "otomaatig" una beddelo "buug" markii la gooyo. Astaantani waxay awood u siinaysaa sixitaanka dheellitirka inay u wareegto "otomaatig" markay qalabku soconayo, wuxuu joojinayaa inuu u wareego "buug" oo wuxuu noqonayaa mid caqli badan. Shaqadani waxay u baahan tahay in dibedda laga xakameeyo is-dhexgalka goobaha hagida kumbuyuutarka.
3 Soo saarista Alarm: shaqadani waxay ku jirtaa saxitaanka dhacdooyinka xadka, culeyska xad dhaafka ah, xaaladaha jira iyo kuwa kaleba, gudbinta ayaa la xirayaa si loogu bixiyo calaamadda joogsiga ee dibadda.
Cilladaha guud ee lifaaqa iyo xalkooda
1. Ma jiro milicsi ka dib korontada, muujintuna ma iftiimayso Hubso in wax soo saarka DC24V ee korontada uu yahay mid caadi ah, hubi in fiilada korontadu ku jirto xaalad wanaagsan, in fiilada korontadu ku jirto xiriir fiican, iyo in xiriirku waa sax ama maahan, ka dibna mar kale ku xir.
2.Drive ma xadidi karo booska
1). Hubi haddii isku xirnaanta ay sax tahay oo kalagoysku xiriir fiican yahay, fur oo dib ujiji mar kale
2) .Sida ku xusan "badhanka beddelka nidaamka beddelka nidaamka", habka hagaajinta gacanta ayaa loo wareejiyaa nidaamka isku dhejinta nidaamka isku xidhka, oo guji "furaha aqoonsiga garaaca tooska ah" si loo bilaabo is-barasho. Mashiinka adeegga waa mid iskiis u baranaya. Ilaali haddii uu jiro wax isbeddel ah oo ku saabsan qiimaha shaxanka baarka ee muuqaalka meertada.
3. wadiddu ma shaqeyso
1) .Hubi haddii isku-xidhka ama isku-darka isku-dhafan uu furan yahay ama suunka uu jaban yahay
2) .Waxaad kadarisaa darawalka iskana hubi hadii qeybta farsamadu kuxirantahay ama riixitaanka gaariga uusan kufilanayn.
4. Wadiddu waxay ku shaqeysaa gacanta iyo si toos ah hal jiho
1) .Hubi haddii fiilooyinka dareeraha ay sax yihiin.
2) .U adeegso sheyga si aad u joojiso dareeraha si aad u aragto haddii aad beddeli kartid jihada, haddii aad awoodid, beddelidda isweydaarsigu caadi ayuu noqonayaa
3) .Hubi si aad u aragto haddii khadka dareemayaasha uu dabacsan yahay ama jaban yahay.
4) .Bixi xulashada dareemayaasha inay sax tahay?
Ultrasonic AE-210 wuxuu ku habboon yahay dhammaan qalabka aan lahayn mesh
AE-100 infrared-ka wuxuu ku habboon yahay qalabka leh mesh (ogow in aan lagu dhejin karin qorraxda tooska ah)
Ato-90 optoelectronic standard optic waxay ku habboon tahay midab raacida qalabka xawaaraha yar
Sawirka CCD AE-400 wuxuu ku habboon yahay qalabka xawaaraha dhexe iyo sare, sida geeska, khadka, midabka, iwm.
5) .Dritver jitter aad buu u weyn yahay. Habka wax-qabadka: Qiimaha faa iidada ayaa lagu dhimayaa marka la eego isku dheelitirka macaashka.
5 Dib-u-hagaajinta rullaluistemadka gadaal iyo gadaal lulid weyn ama dareen la'aan ah: hubi in maaddadu ku siibanayso kitaabkii duudduubnaa, waxay kordhin kartaa xiisadda ama kordhin kartaa kala-baxa duudduuban; faa'iidada waa la hagaajin karaa; Dareemuhu wuxuu u dhowaan karaa sida ugu macquulsan ee loo rogo wareejinta; Hubi farqiga u dhexeeya darawalka iyo qaybta makaanikada.
6. Qalabka guud ma shaqeynayo si sax ah marka aan la bilaabin mana shaqeyn karo bilowga kadib
1) Dareemida maqalka gobolka, Manhajka muujinta weecinta qalabka koontaroolaha, kororka tirada shaxda bar
2). hubi inay jiraan ilo faragelin xoog leh oo ku dhow koontaroolka iyo dareeraha, go'doomi oo dib u tijaabi
3) .Ku xidhnow qalabka siligga dhulka ee alaabtan
4) .Bixi in fiilada iyo fiilada wadista ay ku dhowdahay laynka korantada sare leh, fadlan kala saar imtixaanka
5) .Hubi in fiilada ay jabtay caag ama xiriir xun
6.) heck haddii V- iyo PE yihiin wareeg gaaban
Qalabka korantada ee korantada ayaa si weyn u weyn: dareeraha iyo xakamaynta siday u kala horreeyaan siligga dhulka, dareeraha illaa iyo inta suurtogalka ah ee ku dheggan dhexda maaddada, waxaa ugu wanaagsan in lagu daro qalabka tirtiridda electrostatic
Hore: Mashiinka maaskaro afka duck
Xiga: Shaqooyinka iyo astaamaha mashiinka maaskaro maaskaro
Maqaarka Xumbada Xakamaynta, Soo-saaraha Maaskaro, Baakadaha Xumbada Baakadaha, Mid Ka Mid ah Jiidka Mashiinka Maaskaro, Mashiinka Maaskaro Wejiga, Dharka Xumbada Cas,